Mayelana Nokokuzithokozisa Okuku-inthanethi - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Mayelana Nokokuzithokozisa Okuku-inthanethi – isihloko sosizo
Ungathanda ukuqwala intaba nomBhuda? Kuthiwani ngobusuku be-pasta nogogo abathathu? Ufike endaweni efanele—okuyinomaphi lapho ukhona.
Okokuzithokozisa Kwe-inthanethi yimicimbi ekhethekile ebukhoma ebungazwa ochwepheshe ngokuphelele nge-Zoom, okukunikeza ithuba lokuxhumana nabantu emhlabeni jikelele ngamaqembu amancane ekuzithokoziseni kokuxhumana nokukhumbulekayo.
Yiza njengoba unjalo: Ungaba khona ngedeskithophu, ngethebhulethi, noma ngeselula.
Kuvela bukhoma njalo, kuxhumanisa abantu njalo, futhi kuhambisana nezimfuneko zekhwalithi ezifanayo nezoKuzithokozisa okungokoqobo. Funda kabanzi ngezimfuneko ezengeziwe zoKuzithokozisa kwe-inthanethi.
NjengoKuzithokozisa okungokoqobo, izivakashi zinezinsuku ezingu-30 zokubhala ukuphawula, kungaba phrayivethi kuBabungazi babo noma kuwonk'uwonke ezivakashini zesikhathi esizayo.
Uyafisa ukujoyina okunye? Funda mayelana nokubhukha. Ucabanga ukuthesta amathalente akho njengoMbungazi? Nakhu okudingeka ukwazi kanye nendlela yokuqalisa.
Ukubungaza Okokuzithokozisa kwe-inthanethi
Thumela umbono wakho woKokuzithokozisa kwe-inthanethi nendawo okuyo. Uma kugunyaziwe, uzosebenzisa i-Zoom, ithuluzi lezinkomfa zevidiyo, uku…
Yini okudingeka ngiyazi ngaphambi kokuthi ngibambe iqhaza Ekuzithokoziseni Kwe-inthanethi nge-Zoom?
Ngaphambi kokuba uthamele okokuzithokozisa kwakho, qiniseka ukuthi idivayisi yakho iyahlangabezana nezimfuneko zesistimu ze-Zoom futhi uhlol…